Mpanoratra: Visual model: Dimitri Samborski, sary hosodoko: Dmitry Shevtsov sy MaximMysin, dinam-pandehan-drivotra: Sergey Dubovitsky, feo avy amin'ny fonosana Il-62
Ny mahafinaritra fiaramanidina Rosiana amin'ny 4 milina. Ny modely sy ny textures tsara, ny tontonana no asany, ny feo dia tsara. Tsy maintsy mahita!
Ny Ilyushin Il-86 (OTAN nitatitra name: Camber) dia fohy / antonony-isan-karazany eran-body fiaramanidina sidina. Izany dia ny voalohany ny URSS ny sakany-body sy izao tontolo izao ny faharoa-engined efatra eran-body. Natao ary notsapaina ny Ilyushin endrika biraon'ny ao amin'ny 1970s, dia ny fanamarinan'ny ny fiaramanidina sovietika orinasa, vokarina ary marketed ny URSS.
Ny Il-86 dia ny faharoa an'i farany Sovietika-vanim-potoana fiaramanidina ho natao (teo aloha ny anabavy modely ny Il-96, izay nanidina voalohany tao 1988). Nitranga nandritra ny Leonid Brezhnev vanim-potoana, izay nanamarika ny stagnation maro sehatra ny Sovietika orinasa, ny Il-86 nanana milina kokoa mampiavaka ny 1960s, nandritra ny folo taona eo amin'ny fampandrosoana, ary dia tsy niditra fanompoana ara-potoana ho an'ny Moscou Lalao Olaimpika, toy ny tany am-boalohany natao. 106 ihany no naorina. Ny karazana no nampiasain'i Aeroflot sy ny mpandimby lahatsoratra-Sovietika airlines ary telo ireo ihany no aondrana. Ao amin'ny fanompoana, dia nahazo fankatoavana ho toy ny tena azo antoka sy azo itokisana milina.
Tamin'ny fiandohan'ny 2012, ihany 4 Il-86s nijanona tamin'ny fanompoana, izay samy miaraka amin'ny Rosiana Air Force. (Wikipedia)